Umndeni | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
9 Wezihloko Zobufakazi
UMomo edolobheni laseHefei, Esifundazweni sase-Anhui Ngaphambi kokuba ngikholwe kuNkulunkulu, noma ngabe ngangenzani, ngangingafuni neze ukusala emuva. Ngangizimisele ukwamukela noma yibuphi ubunzima inqobo nje uma lokh…
UChangkai eDolobheni laseBenxi, esiFundazweni saseLiaoning Amazwi ajwayelekile athi “Bonke babeka imithwalo ehhashini elivumayo” amazwi engiwajwayele kakhulu. Mina nomyeni wami sasingabantu abangenabuqili: Uma kukhuluny…
Ukemu Edolobheni laseZhumadian, Esifundazweni saseHenan Engqondweni yami, bengilokhu ngizibona njengomuntu onobuntu. Ngike ngacabanga ngalokhu ngoba, omakhelwane bami babeke bangincome phambi kwabazali bami ngokuba umun…
UTong Xin Esifundazweni saseFujian Ngazalelwa ezindaweni ezingaphandle kwasemadolobheni. Ngazalelwa emndenini wabalimi abazithobile futhi phezu kwalokho umndeni wethu wawumbalwa ngokwesibalo, ngakho sasiqinelwa esikhat…
Ekuthandazeleni Ukuthola Umsebenzi, Ngizuza Okungaphezulu Komsebenzi nje
NguJiejing, eJapan Kwase kunesikhathi ngizwe ukuthi iJapan yayiyizwe elihle ngempela ukuya kulo. Emva kokufika eJapan ngo-Ephreli 2015 ngase ngibona ukuthi izinto zazizinhle ngempela lapho nokuthi abantu nabo babehlonip…
NguLi Tong AmaKristu amaningi adidekile: UNkulunkulu uluthando futhi unamandla onke, ngakho kungani evumela ukuba sihlupheke? Kungenzeka ukuthi usilahlile? Lo mbuzo wawuhlala ungixaka, kodwa kamuva, ngenxa yokuthandaza …
NguZhou Jing Ngelinye ilanga ngabona ingxoxo eshisayo ku-inthanethi; abantu babethi ukuvela kwezinyanga ezine eziyigazi ebusuku engxenyeni yomhlaba eseNtshonalanga iyisexwayiso sezikhathi zokugcina, nokuthi ukuzamazama …
Ngu-Anyuan, ePhilippines Okuqukethwe Iyofika Kanjani INkosi? Yimuphi Umsebenzi INkosi Eyowenza Lapho Ibuya? Indlela Yokwamukela Ukubuya KweNkosi Eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili eyedlule, abalandeli beNkosi …
NguBecky, e-U.S. Namuhla, izinhlekelele emhlabeni ziya ngokuya ziba zimbi. Izindaba zigcwele imibiko ngezifo eziwubhubhane, ukuzamazama komhlaba, izikhukhula, nezomiso. Uke wacabanga nje uwedwa ukuthi: Iziphrofetho zoku…